रेडियोको एउटा सम्वाद जसले लक्ष्मीलाई ५ दशकदेखि एक्लो बनायो
कला / साहित्य जीवनशैली समाचार
दिप्सन लुइटेल काठमाडाैं, ६ साउन
२०२३ सालको कुरा । भर्खरै १५ वर्ष पुगेकी लक्ष्मी भुषाल रेडियो नेपालको जागिरे थिइन् । उनी रेडियो नेपालमा कृषि कार्यक्रम चलाउँथिन् ।
रेडियो नेपालमा कार्यक्रम चलाउने लक्ष्मीलाई आफूले बोलेको रेडियोमा बज्छ भन्ने सम्मको ज्ञान पनि थिएन । उनी सोच्थिन्, ‘यहीँ बोल्यो, यहीँ सकियो’ ।
एक दिन रेडियो नेपालकै एक जना सहकर्मीले लक्ष्मीलाई सोधे, ‘तिम्रो घरकाले तिमीले बोलेको सुन्नुहुन्छ ?’
लक्ष्मी छक्क परिन्, ‘अहँ ! सुन्दैनन् ।’
अर्को दिन लक्ष्मी घरको रेडियो बोकेर रेडियो नेपालमा पुगिन् । तिनै सरले लक्ष्मीको रेडियोमा ‘रेडियो नेपाल’ बज्ने गरी मिटर घुमाइदिए ।
लक्ष्मी केही उत्साहित हुुँदै घर फर्किइन् । घरमा आफ्नो बोली रेडियोमा सुन्दा खुसी हुन्छन् भन्ने लक्ष्मीको विश्वास थियो । तर, त्यहाँ त नसोचेको भइदियो ।
लक्ष्मीले घरमा आफ्नो कार्यक्रम सुनाइन् । त्यहाँ बोलिएको एक संवाद थियो, ‘ए भुन्टेकी आमा, भात पकाइस् ?’ कृषि कार्यक्रमका पुरुष पात्र बालकृष्ण शर्माले लक्ष्मीलाई ‘भुन्टेकी आमा’ सम्बोधन गरेका थिए ।
उक्त संवादपछि घरमा कलह सुरू भयो । ‘यो लक्ष्मीले त हामीलाई नै पत्तो नदिई बिहे गरिसकिछे’ भन्दै बुबाले आमालाई गाली गरे, ‘तैँले गर्दा हेर आज यसले नाक काटी ।’
दाजुभाइबाट पनि लक्ष्मीले उस्तै गाली खेप्नुपर्‍यो ।
गाउँभरि हल्ला चल्यो, ‘यो लक्ष्मीले त बिहे गरेर भुन्टे जन्माइसकी छे । यस्तो कुरा पनि यसले लुकाएर राखिछे’ । घरदेखि गाउँसम्म कलह मच्चियो ।
उनी घरबाट निकालिन पुगिन् । १७ वर्ष नपुग्दै उनी घरविहीन भइन् ।
आखिर आफैँले लेखेको उक्त संवादका कारण आफू घरबाट निकालिन्छु भन्ने उनलाई के पत्तो ? यदि पत्तो थियो भने उनले लेख्ने थिइनन्, लेखे पनि घरमा सुनाउने थिइनन् होला ।
आफूलाई घरबाट निकाल्न लाग्दा लक्ष्मीले अनेक तरहबाट परिवारलाई सम्झाउने प्रयास गरिन् । तर, जवाफमा उल्टै प्रश्न गरिन्थ्यो, ‘रेडियोले पनि झुट बोल्छ ? तँ हामीलाई मुर्ख बनाउन खोज्छेस् ?’
लक्ष्मी घरबाट निकालिइन् । अब उनले शान्तिले बस्न पाइनन् । उनी जहाँ बस्थिन्, त्यहीँ उनको परिवार आएर कुटपिट गर्थे । त्यसैले उनले कहिल्यै आफ्नो वास्तविक ठेगाना बताइनन् ।
लक्ष्मी भन्छिन्, ‘म पाटन बस्दा भक्तपुर बसेकी छु भन्थेँ । भक्तपुर बस्दा अर्कै ठाउँ भन्थेँ । मैले कहिल्यै आफ्नो सही ठेगना बताइनँ ।’
अनि पुगियो रेडियो नेपाल…
काठमाडौंमै बस्ने लक्ष्मीका दिदीहरू सिंहदरबारमा काम गर्थे । लक्ष्मीलाई सिंहदरबार हेर्ने रहर जाग्यो । त्यसैले दिदीहरुसँगै सिंहदरबार छिरिन् ।
सिंहदरबार पुगेपछि लक्ष्मीका दिदीहरू आफ्नो काममा लागे । लक्ष्मी सिंहदरबारको ‘कम्पाउन्ड’मा राखिएको गाडीनजिकै पुगिन् । गाडीको दुवैतिरको ऐना एकदमै फोहोर थियो । लक्ष्मीले त्यो फोहोर पुछिन् । त्यहाँ आफैँलाई देख्दा उनी छक्क परिन् ।
लक्ष्मीको यो गतिविधि माथि बसेर रेडियो नेपालका कर्मचारीहरुले हेरिरहेका थिए । उनीहरूले लक्ष्मीलाई माथि बोलाए ।
उनीहरूले लक्ष्मीलाई चिया सोधे । लक्ष्मीले पिउने बताइन् । एक कपभरी ल्याएर दिइयो । लक्ष्मीले मुखमा हाल्नेबित्तिकै कप फालिदिइन्, ‘यस्तो कालो नमीठो चिया हामीले खाने गरेको छैन ।’
पछि बल्ल थाहा पाइन्, त्यो कफी थियो ।
लक्ष्मी हक्की र बोलिरहने शैली त्यहाँका कर्मचारीले मन पराए । र, जागिरको अफर गरे । लक्ष्मी रेडियोमा काम गर्न तयार भइन् ।
रेडियोमा पुग्नेबित्तिकै उनलाई बोल्न भने दिइएन । २-३ महिना उनलाई लेख्न सिकाइयो । त्यसपछि उनी आफैँ लेख्न र बोल्न थालिन् ।
लक्ष्मी भन्छिन्, ‘लेख्न त म त्यही बेला पनि लेख्थे । त्यसैले पनि मलाई खासै गाह्रो भएन । त्यसमाथि मलाई सबैले माया गरेर नै सिकाउनुभयो ।’
रेडियो नेपालमा लक्ष्मीले कृषि कार्यक्रमहरू चलाउँथिन् । कृषकहरूले लक्ष्मीलाई खुबै सुन्थे । लक्ष्मीले बोल्ने संवाद, शैलीलाई स्राेताले खुबै रुचाउँथे । बोलीबाट नै लक्ष्मीले धेरै शुभचिन्तक कमाएकी थिइन् ।
लक्ष्मीले रेडियोमा बोल्ने ‘हरि शरणम्’, ‘कुरा गर्‍यो कुरैको दुःख’ जस्ता शब्दले सुन्नेहरूकाे मन जितेको थिये । धेरैले ययी थेगोको प्रशंसा गर्थे ।
घरबाट निकालिएकाले पनि लक्ष्मीमा रेडियोप्रतिको माया झनै बढेको थियो । उनले सोच्ने गर्थिन्, ‘मैले रेडियोकै कारण बाउआमा गुमाएँ । अब फेरि रेडियो पनि किन गुमाउने भन्ने लागेर मैले रेडियोमा धेरै मिहेनत गरेँ ।’
आखिर लक्ष्मीले परिवार गुमाएर नेपालभरका स्राेताको मन जितिन् । त्यसैमा खुसी भइन् उनी ।
लक्ष्मी भन्छिन्, ‘केही पाउन केही गुमाउनुपर्छ भन्थे । आखिर मैले स्राेताको माया पाउनकै लागि आफ्नो परिवार गुमाएकी रहेछु । मैले रेडियोबाट नै अर्को परिवार पाएकी थिएँ ।’
लक्ष्मीले रेडियोमा हप्ताको ४ वटा कार्यक्रम तयार गर्थिन् । आफ्ना लागि आफैँ कार्यक्रम लेख्थिन् । ‘मलाई लेख्नका लागि छुट्टै कोठा दिइएको थियो’, लक्ष्मी भन्छिन्, ‘त्यहाँ बसेर लेख्दै गर्दा म कतै निस्किन्न थिएँ । निस्कँदा म कता छु भन्ने पत्तो हुन्न थियो ।’
रेडियो नेपालमा कृषि कार्यक्रम उत्कृष्ट भएपछि लक्ष्मीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वन विभागबाट पनि अफर आएको थियो । तर, आफूलाई बाटो देखाउने कृषि छोडेर लक्ष्मी कतै जान चाहिनन् ।
त्यही समय लक्ष्मीलाई चलचित्रको पनि अफर आउने गर्थे । तर, लक्ष्मीको उत्तर एउटै हुन्थ्यो, ‘रेडियोमा बोल्दा घरबाट निकालिएँ । अब चलचित्रमा काम गरेँ भने त देश नै निकालामा पर्छु होला । त्यसैले गर्दिनँ ।’
तर, पछि राम्रोराम्रो चलचित्रबाट अफर आएपछि उनले नाइँ भन्न सकिनन् । लक्ष्मीले ‘सिलु’ नामक नेवारी चलचित्रबाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।
त्यसपश्चात् ‘सोल्टिनी, लक्ष्मी पूजा, जोनी जेन्टलमेन, लभ लभ लभ, आमा’ लगायत चलचित्रमा काम गरिसकेकी छन् । उनी अभिनित ‘हिजो आजका कुरा’ रिलिजको तयारीमा छ ।
५ दशक एक्लै बस्दा…
१६ वर्षको उमेरमा नै घरबाट निकालिएकी लक्ष्मीले ५ दशक एक्लो जीवन बिताइन् । उनले न परिवारको साथ पाइन्, न कोही जीवनसाथी नै छानिन् । नाटकमा कैयाैँ पटक अर्काकी श्रीमती, आमा, हजुरआमा बनेकी लक्ष्मी वास्तविक जीवन भने एक्लै बिताइरहेकी छन् ।
लक्ष्मी सोच्थिन्, ‘मलाई मेरो परिवारले त बुझेन । अरु कसले बुझ्थ्याे होला र ?’ यही सोचले गर्दा पनि उनले विवाह गर्ने हिम्मत गरिनन् ।
लक्ष्मी आफूले नाटकसँग नै विवाह गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘केही गरेर देखाउनैपर्ने थियो । त्यसैले कामबाट बाहिर सोच्ने फुर्सद नै भएन । विवाह गरेर रोकिने रहर पनि मलाई कहिल्यै भएन ।’
एक्लो बसाइको सुरुवाती दिन भने लक्ष्मीलाई निकै गाह्रो भएको थियो । उमेर पुगेकी लक्ष्मीमाथि आँखा गाड्ने धेरै थिए । त्यो नजरबाट बच्न भने लक्ष्मीलाई गाह्रो परेको थियो । लक्ष्मी भन्छिन्, ‘कुनै ठाउँमा त म एक दिन पनि नबसी कोठा सरेकी छु ।’
पछि लक्ष्मीले राम्रो घर पाइन् । आफूलाई माया गर्ने घरबेटी दाजु-भाउजू पाइन् । त्यही घरमा लक्ष्मीले २३ वर्ष बिताइन् ।
नेपाल सरकारबाट उपसचिव भएर ‘रिटार्यर्ड’ भएकी लक्ष्मीले अहिले भने आफ्नो ओत लाग्ने घर बनाएकी छन् । ५२ वर्ष गरेको सङ्घर्षबाट उनले घर ठड्याएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘एउटा चिटिक्क परेको घर बनाउने रहर सधैँ थियो । घर त बनाएँ तर आफू मात्रै अट्ने बनाएकी छु । त्यो बनाउन पनि ५२ वर्ष लाग्यो ।’
यति धेरै सङ्घर्ष गरेर सफलता हात पारेकी लक्ष्मी भुषालले जीवनलाई कसरी बुझेकी छिन् त ?
लक्ष्मी भन्छिन्, ‘जीवन सङ्घर्ष हो भने शास्वत सत्य मृत्यु हो ।’
अहिले लक्ष्मीले अतितलाई बिर्सिन खोजिरहेकी छन् । अतितलाई सम्झिँदा उनलाई पीडा हुन्छ । उनी बाँकी जीवन खुसी भएर जिउन चाहन्छिन् ।
‘मलाई पहिलाको कुरा सम्झिँदा पक्कै पीडा हुन्छ । त्यसैले पहिलाको कुरा सबै बिर्सिन्छु र अहिलेको समयमा जिउने प्रयास गर्नेछु’, उनले भनिन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, ६ साउन २०७७, ०७:०८:००
'नाच मेरी झुमा'बाट हिट, ‘ओए काजल’बाट सन्तुष्टि
कोरोना प्रभाव : शून्य चलचित्र क्षेत्र, चकाचक म्युजिक भिडियो
बिहान सुटिङ, दिउँसो रेकर्डिङ, फेरि लिप्सिङ पनि !